Ny Huawei Watch GT2 Pro dia ofisialy izao: famolavolana, endrika ary vidiny | Androidsis
Nerea Pereira | | About us, SmartWatch
Mazava fa i Apple no mpanjakan'ny smartwatches, saingy indray, manana mpifaninana aminy izy, ary izany dia Huawei. Ny mpanamboatra sinoa dia natanjaka tamin'ity sehatra ity noho ny fanolorany vahaolana ho an'ny vidiny tsy azo resena. Manana ohatra mazava isika ao aminy Huawei fiambenana mety, vao natomboka. Tsy faly amin'izany, nanolotra ny vaovao ny Sinoa multinasional Huawei Watch GT2 Pro.
Tsy takona afenina ny fiasan'izy ireo amin'ny kinova mahery kokoa an'ny Watch GT2. Inona koa, ny sary sasantsasany amin'ireo toetra izay mety nipoitra ity modely vaovao ity, ary farany, azontsika atao ny manamarina ireo andinindininy ireo
1 Famolavolana mitovy amin'ny Huawei Watch GT2 Pro
2 Bateria mifanaraka amin'ny andrasana
Famolavolana mitovy amin'ny Huawei Watch GT2 Pro
Mikasika ny hatsarany, tsy mahita vaovao izahay raha ampitahaina amin'ny kinova mahazatra. Izahay dia miatrika vokatra iray izay manana hatsarana kanto minimalista, ny tranga misy azy avy amin'ny firavaka seramika sy titanium ho an'ny lamosiny dia ilay manome endrika majestic nefa tsotra.
Ny bokotra ara-batana dia miorina amin'ny sisin'ny fitaovana, noho ireo azontsika ampiasaina amin'ny asany samihafa. Manoloana ny gorodona mety hitranga dia hitantsika fa ny Huawei Watch GT2 Pro dia manana kristaly safira miaro ny tontolony.
Satria miresaka momba ny tontonana isika dia manana Vahaolana AMOLED an'ny Samsung. Noho izany, ny efijery 1,39-inch azy dia afaka manolotra kalitaon'ny sary tsara indrindra, ary miaraka aminy, jereo ny atiny sy fampandrenesana rehetra izay ho azonao na aiza na aiza, na eo aza ny masoandro.
Amin'ireo fampiasana rehetra omentsika famantaranandro marani-tsaina, ny iray loha laharana dia ny mifehy ny fampihetseham-batantsika. Raha ny Huawei Watch GT2 Pro dia toa natao manokana ho an'io fiasa io izy io. Indrindra indrindra satria manana maherin'ny 100 mavitrika hetsika izy, izay misy ny snowboarding na milomano. Bebe kokoa, na izany aza afaka manisa ny fampahalalana momba anao izany raha milalao golf ianao.
Mazava ho azy, mba ho azo atao izany, ny Watch GT2 Pro dia manana karazana sensor rehetra hahafahana manara-maso ireo hetsika rehetra ireo. Anisan'ireny ny GPS misy maody fitetezana tsy an-tserasera. Amin'ity fitaovana ity dia azonao atao ny manoratra karazana fanatanjahan-tena rehetra ampiharinao nefa tsy mila mitondra findainao.
Raha mpankafy fitsangatsanganana an-tendrombohitra ianao dia tokony ho fantatrao fa ity famantaranandro marani-tsaina ity dia mampitandrina anao amin'ny ora maraina sy amin'ny takariva, ny fizotran'ny volana ary ny fampandrenesana ny toetrandro, miampy iray hafa amin'ity smartwatch ity. Saingy mbola betsaka ny vaovao, miaraka amin'ny sensor SpO2 koa izy io, ity a mpanara-maso saturation oxygen oxygenRaha manao fanatanjahan-tena avo lenta ianao, dia ho tsara ho anao izany. Mazava ho azy, ary na dia mbola tsy niresaka an'io aza isika, ny famantaranandro dia manana ny sisa amin'ireo sensor izay efa fantatsika amin'ny maodely hafa, toy ny fandrefesana ny fo na ny pedometer.
Raha ny fandrefesana ny tahan'ny tahan'ny fony dia zava-dehibe ny manamarika fa ny orinasa sinoa dia manomboka voalohany ny sensor ho an'ny tahan'ny fo Huawei TruSeen 4.0 vaovao. Modely vaovao ahafahana mahazo mari-pahaizana bebe kokoa. Manampy fitaovana hafa izahay, TruSidur, izay mandrefy ny haavon'ny fitsaharana sy ny adin-tsainao isan'andro. Ho fanampin'izany, manome anao torohevitra izy io mba hahafahanao matory tsara kokoa ary hampihena ilay fihenjanana izay angoninao hiaina milamina kokoa.
Bateria mifanaraka amin'ny andrasana
Ao amin'ny fianakaviana Huawei Watch GT dia mahazatra antsika ny fahaleovan-tena tsy mampino. Ary mazava ho azy ny baterian'ny maodely vaovao, Huawei Watch GT2 Pro tsy afaka naningana. Manome toky ny mpanamboatra fa ity smartwatch vaovao ity dia mety haharitra hatramin'ny 14 andro, ary mahatratra 30 ora ny fampiasana tsy miova raha ampandeha ny GPS. Fa ny zavatra tsara indrindra dia ny hoe manana charger Wireless tsy misy hatak'andro. Ny fandoavam-bola maharitra dimy minitra dia ampy hanomezana fitaovana fanampiny 10 fitaovana.
Fa toy ny zavatra hafa rehetra, mbola mila miandry ny fametrahan'ny mpanamboatra ny vokatra eny an-tsena isika mba hahafahany manamarina ity fahaleovan-tena tsy mampino atolotry ny Huawei Watch GT2 Pro ity. Tena marina izany.
Mikasika ny daty sy vidiny andrasana dia nanamafy ny orinasa sinoa fa ho tonga izy ireo amin'ny volana septambra izao amin'ny vidin'ny 329 euro amin'ny maodely Sport, izay misy fehin-kibo, ary 349 euro ho an'ny maodely Klasika, miaraka amin'ny fehikibo hoditra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny Huawei Watch GT2 Pro dia ofisialy izao
Ahoana ny fomba hahitana lalao maimaim-poana tsy misy doka sy / na tsy misy micropayments amin'ny Google Play Game: ny vaovao lehibe